Amandla entengiso ye-infographic ... ngesilumkiso | Martech Zone
Amandla entengiso ye-infographic… ngesilumkiso
NgeCawa, Oktobha 5, 2014 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Olu papasho kunye nomsebenzi omninzi esenzela abathengi kubandakanya umxholo obonakalayo. Iyasebenza… abaphulaphuli bethu ikhule kakhulu ngokugxila kumxholo obonwayo kwaye sikwabancedile abathengi bethu ukuba bakhule ukufikelela kwabo kunye nomxholo obonakalayo njengenxalenye yomxube.
Oku kwi infographic yokuba uLawulo lweMarike yoLawulo yenzelwe ukubonisa amandla omxholo obonakalayo. Akukho mfihlo yokuba abathengi baphendula ngcono kuthengiso olubonakalayo, kwaye esi sesinye sezizathu sokuba infographics zibeyindlela eyaziwayo nesebenzayo yokuthengisa kwi-Intanethi. Ziyakuvumela ukuba ubonise ulwazi ngendlela eya kuthi abaphulaphuli bakho bawungenise umyalezo wakho, endaweni yokubaleka nje kwiibhloko zombhalo kwaye ugcine kuphela ipesenti encinci yolwazi.
Isilumkiso soMxholo weVenkile
Iziqwenga zomxholo ezibonakalayo njenge-infographics zibalulekile kwi Isicwangciso somxholo esisebenzayo kodwa kuphela ukuba zinikezelwe kwiqonga elilungiselelwe elinceda ukuqhuba ukuzibandakanya okunzulu kunye namathuba okuguqula. Ndithetha ukuthini?
Ngaba isicatshulwa esidibeneyo sanele ukuba uncede umxholo wakho obonakalayo ube ibekwe ziinjini zokukhangela? Uya kuqaphela ukuba sihlala sisonga i-infographics ngombhalo onolwazi. Yiyo loo nto iinjini zokukhangela zingaboni iphepha njengokukhanya kumxholo kwaye lingahoywanga kwinqanaba. Ngelixa i-infographics ihlala ineetoni zomxholo, uGoogle akabonakalisi umxholo ngaphakathi kwe-infographic, bajonga umxholo ojikeleze wona. Matt Cutts wada walumkisa kwiminyaka embalwa edlulileyo ukuba amakhonkco kunye nokuthandwa infographics inokuncitshiswa ziinjini zokukhangela (IMO, iya kuba sisidenge kwaye ndiyathandabuza ukuba iya kuze yenzeke).
kukhona i umnxeba kwisenzo kwi-infographic? Akonelanga ukuba ufunde nje i-infographic kwaye ubone ilogo yokuba ngubani oyenzileyo, sesiphi isicwangciso-qhinga onaso sokuthatha umfundi aye kwinqanaba elilandelayo kwinkqubo yokuthenga? Sivame ukukhupha i-infographics ukukhuthaza umxholo onzulu njengamaphepha amhlophe okanye ukukhuthaza uhlobo oluthile lobhaliso kwakhona kwindawo yabathengi.
kukhona i iphepha lokufika ngesithembiso ukuba iCTA iya kuqhuba ukugcwala kwabantu? Ngaba ikhona ifom yobhaliso yokutyikitya abafundi kwi-imeyile okanye kwincwadana yeendaba? Ngaba zikhona ezinye izithuba ezinxulumene noko okanye infographics ekwabelwana ngazo kwiphepha lokufika ukuze ukwazi ukuqhuba umfundi ngokunzulu?
Unjani ukulinganisa ifuthe umxholo obonakalayo okwabelwana ngawo? Asazihluphi nge khuphela kwaye uncamathisele lo mbhalo ibhokisi engezantsi kwe-infographic ethi izame ukunyanzela i-backlink. Nge-CTA yethu kwi-infographic, sihlala sisebenzisa isifinyezo sekhonkco njengeBit.ly esinceda ukuba silinganise umsebenzi othe ngqo owenziwe yi-infographic.
Unjani kwaye nini ukukhuthaza i-infographic? Sisasaza i-infographics yethu kubaxumi bethu kwifomathi yokuma komhlaba ye-PDF eluncedo kwiSlideshare kunye sazisa infographic Kuwo onke amajelo entlalontle abaxhasi, amajelo ethu entlalontle, kwaye bahlala benobudlelwane boluntu nabaxhasi be-infographic kwiindawo ezifanelekileyo. Ukudalwa kwe-infographic akwanele, kuya kufuneka ube nesicwangciso sokunyusa. Kwaye siza kuyikhuthaza iphindaphindwe… hayi nje iphulo elinye.
Le infographic ichaza ukuba kutheni umxholo obonakalayo usebenza ngokukuko, uyabandakanyeka kwaye uyakholisa. Ithetha ngempumelelo yesicwangciso se-infographic kwaye kutheni ishishini lakho kufuneka liqwalasele ukuthengisa nge-infographic. Intengiso ye-infographic liqhinga eyoyikekayo lokutsala, kodwa kuya kufuneka ube nesicwangciso esihambelana noko ukugcina nokuguqula itrafikhi oyitsalayo!
tags: DK New Mediaintengiso ye-infographicukuphakanyiswa kwe-infographicIsicwangciso se-infographicimizobo yolwaziImithombo yeendaba elawula intengisoAmanani entengisoUmxholo obonakalayo
Sibubungqina bokuba uMdla kwiTekhnoloji yeNtengiso uyakhula!
Usebenzisa njani iMidiya yokuNceda ukuNceda ishishini lakho